Bayern Munich Oo Isha Ku Heysa Erling Braut Haaland Si Uu Baddel Ugu Noqdo Robert Lewandowski
HomeWararka CiyaarahaBayern Munich oo isha ku heysa Erling Braut Haaland si uu baddel ugu noqdo Robert Lewandowski
October 14, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Suuqa kala iibsiga 0
Bayern Munich ayaa lagu soo waramayaa inay ku biireyso tartanka loogu jiro saxiixa weerarka Erling Braut Haaland haddii ay iska iibiso Robert Lewandowski .
33 jirkaan ayaa 11 gool shabaqa soo taabtay sagaal kulan oo uu u saftay Bayern xilli ciyaareedkan, taasoo xoojineysa doodda ah inuu weli ka mid yahay weeraryahannada ugu sarreeya kubadda cagta Yurub.
Si kastaba ha ahaatee, xilli uu xiddiga reer Poland ka harsan yahay wax ka yar laba sano qandaraaskiisa, waxaa la og yahay inuu u furan yahay inuu ku biiro kooxo cusub.
Sida laga soo xigtay Bild , Haaland ayaa loo aqoonsaday inuu noqon karo bedelka halyeeyga haddii Bayern ay doorato inay ganacsi sameyso xagaaga dambe.
Iyada oo Haaland la sheegay in qandaraaskiisa lagu burburin karo £ 64m, Bayern ayaa aragti ahaan heli karta badal dheer oo Lewandowski iyada oo aan kharash badan ku bixin.
Si kastaba ha ahaatee, kooxaha Manchester City , Manchester United , Liverpool iyo Real Madrid ayaa sidoo kale loo malaynayaa inay diyaar u yihiin inay dalab u gudbiyaan xiddiga reer Norway sannadka 2022 -ka.